Gabriella Engels, Musikana anonzi akarohwa naAmai Grace Mugabe
Nyaya yemudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe yekunzi vakarova zvakaipisisa mumwe musikana wemakore makumi maviri avakawana ari mune imwe hotera muSouth Africa nevanakomana vavo yasimudza mitauro yakawanda pamadendemutande, munhepfenyuro pamwe nemumapepanhau.
Pamusoro pezvo, nyaya iyi inonzi yasiyawo hukama hweSouth Africa neZimbabwe, sezvo ruzhinji rwevanhu munyika mbiri idzi vari kuti Amai Mugabe vanofanirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva vachitongwa nenyaya iyi.
Pane mashoko ari kubuda anoti hurumende yeZimbabwe kuburikidza nemuzinda wayo uri muSouth Africa pamwe nemagweta emudzimai wemutungamiri wenyika uyu, vakatoisa chikumbiro chekuti Amai Mugabe vasamiswa pamberi pematare edzimhosva ichiti vanofanirwa kuchengetedzwa nemutemo unochengetedza vamiriri vedzimwe nyika, kana kuti "diplomatic immunity", sezvo vari mudzimai wemutungamiri wenyika.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro veZanu PF mudunhu reUK, VaNick Mangwana, avo vanoti nekuda kwehukama huri pakati peZimbabwe neSouth Africa, havaoni Amai Mugabe vachimiswa pamberi pedare redzimhosva.
VaMangwana vanotiwo hapana ati anzwa divi raAmai Mugabe, sezvo shoko riri kungobuda riri kubva kuna nyakurohwa.
Asi mutauriri weMDC-T uye vari gweta, VaObert Gutu, vanoti Amai Mugabe havakwanise kuchengetedzwa nemutemo uyu sezvo vakanga vasiri pabasa rehurumende pavakapinda muSouth Africa vachinopara mhosva iyi.
VaGutu vanoti muChirungu pane inonzi prima facie case, zvichireva kuti pahumbowo huripo zvatoratidza kuti pane nyaya yekuti Amai Mugabe vanofanirwa kunge vachitongwa, vozopawo rutivi rwenyaya yavo.
Amai Mugabe vanonzi vakaenda kuSouth Africa kunorapwa gumbo ravakatsikwa nemotokari inotakura mutungamiri wenyika mwedzi wapera panhandare yendege muHarare, uye vari kutarisirwa kupinda musangano wemadzimai evatungamiri venyika dzemuSADC, uyo uri kutarisirwa kuitwa nemusi weMugovera.
VaMugabe vanonzi vatovewo muSouth Africa vakamirira musangano uyu, asi vamwe vanofunga kuti pavakamirira musangano weSADC, VaMugabe vachange vachiedza kununura mudzimai wavo kubva muchinyadzo chakadai.
Hurukuro naVaObert Gutu pamwe naVaNick Mangwana